Ọrịa Autoimmune | Ọkọwa Okwu Ahụike
Ọrịa sitere n'okike maka ọrịa autoimmune. Ọrịa autoimmune bụ nsonaazụ nke sistem na-abanye n'ọnọdụ arụ ọrụ.
Ọrịa Autoimmune - Gịnị Ka Ọ Bụ?
Ọnọdụ autoimmune niile, ọgba aghara na syndromes bụ nsonaazụ nke sistem ahụ na - aga ọnọdụ nke ọrụ hyper nke akọwara n'ụzọ ezighi ezi dịka sistemu na - alụso ndị ọbịa ọgụ. INFLAMMATION bụ ihe na - ebutekarị ihe na - akpata ihe ọ bụla enwere ike ịkpọ ya ọrịa ma ọ bụ ọnọdụ onwerema.